Chin'ono Anosvika paMatare Akaiswa Cheni Mumakumbo neMumaoko
Mbudzi 06, 2020
Zimbabwe Journalist Hopewell Chin'ono
Mutori wenhau ane mukurumbira, Hopewell Chin’ono, aunzwa kudare akaiswa ngetani dzemumaowoko nedzemumakumbo izvo zvashorwa zvikuru nerimwe remagweta ake, Amai Beatrice Mtetwa Mtetwa mudare.
Amai Mtetwa vabva vasvitsa chichemo chekuti Chin’ono akaendeswa seyi kujeri reChikurubi Maxumim Prison kwaanonzi ari kugara nevasungwa vakatongwa kare avo vakapara mhosva dzakakura kwazvo uko kunodaidzwa kuti kuD-Section.
Vachipindura kuchichemo ichi, muchuchisi wenyaya iyi, VaLancelot Mutsokoti, vati bazi rinochengeta vasungwa ndiro rinoziva zvikonzero zvekuti vakamuendeserei kuChikurubi asi vati vachaita tsvagiridzo yekuti zvakafamba sei.
Vachitura mutongo wavo pachikumbiro chasvitswa kudare naChin’ono kubudikidza nemagweta ake, mutongi wedare, Amai Marehwanazvo Gofa, vati Chin’ono akaunzwa pamatare emhosva maawa makumi mana nemasere asati adarika kubva paakasungwa saka nokudaro chin’ono anga ari pamberi pedare zviri pamutemo.
Mutongo uyu unotevera mashoko asvitswa kudare nerimwe remagweta aChin’ono, Amai Beatrice Mtetwa, ekuti musungwa anofanira kumiswa pamberi pemutongi nguva iyi isati yadarika kwete kuti nguva iyi inotarwa munhu paanosvika pamatare.
Rimwe remagweta aChin’ono, VaGift Mtisi, vatsinhira kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Mushure memutongo uyu, magweta aChin’ono asvitsawo chikumbiro chekuti hurumende itsanangure kuti mhosva iri kupomerwa Chin’ono chaiyo ndeyeyi sezvo vachiti mapepa ari pamberi pedare haaburitse pachena mhosva inonzi yakaparwa naChin’ono.
Amai Mtetwa vati Chin’ono mutori wenhau saka nokudaro hainganzi imhosva kuti haana kutaura kuti vanhu vakamupa mashoko ezvaanonzi akanyora padandemutande rake reTwitter ndivanani.
VaMtisi vati Chin’ono haafanire kutongwa nemhosva isinganyatsonzwisisike.
Asi muchuchisi wenyaya iyi, VaLancelot Mutsokoti, vati vanoda kusvika neMuvhuro kuti vape mhinduro izere panyaya iyi.
Amai Gofa vati nyaya iyi ichaemderera mberi neMuvhuro.
Chin’ono akambosungwa muna Chikunguru akagara mujeri kwemasvondo matanhatu achipomerwa mhsova yekunzi akashandisa dandemutande ravo Twitter kukurudzira veruzhinji kuti varatidzire.
SADC Inowirirana Kutumira Mauto kuCabo Delgado, kuMozambique
MDC Alliance Inoda Kuti Mitemo yeSarudzo Igadziriswe
Vagari Vochema neCovid-19 Lockdown kuChiredzi
Bato rePatriotic Zimbabweans Rorwira Kuti Vari Kunze Vavhote muSarudzo dza2023
Ongororo Yakaitwa neHofisi yaAmai Chiri Inoti Makanzuru Ari Kutadza Kuita Mabasa Awo neMazvo.